Isithuthwane/Isifo sokuwa | Health Content
SIYINI ISIFO SESITHUTHWANE (ISIFO SOKUWA)?
Siyisifo esiphathelene nokusebenza kwengqondo esenza umuntu aquleke. Ngokuvamile lokhu kuquleka kuthatha imizuzu engaphansi kwemihlanu. Isithuthwane siyisimo sozokwelapha esibonakala ngokudabula kagesi okwenzeka njalo kungahleliwe. (amangqamuzana) obuchopho kumaseli wobuchopho,aziwa ngokuthi ukubanjwa, okungaphazamisa ukusebenza okujwayelekile kobuchopho.
Kunezinhlobo eziningi zokuquleka,kuye ngokuthi ingxenye yobuchopho ebandakanyekayo ikuphi:Indawo ethize yobuchopho ethintekile ingaholela kuhlobo oluthize lokuwa.
Ukulimala kwe-tonic clonic kubonakaliswa izakhi zomzimba kanye nokuhlekelelwa ukwazi okuvame ukuvela ngokuzumayo.Isigaba sethoni yilapho izicubu ziba lukhuni.Isigaba se-clonic sibonakalisa ukuphindaphinda okuphindaphindiwe nokuphumula kwemisipha.Ukuhlaselwa okukhulu ngomzimba kungakucwaswa okubanzi kwamathoni.
Ukwehluleka kokutholwa (okubizwa) nangokuthi ukubanjwa kokuhlaselwa kwezilwane ezingelapheki-Zingaqala kacane kancane,umuntu azilungiselele esikhaleni, njengoba umuntu onalolu hlobo lokuquleka kungavela nje ukuthi akanandaba noma uphazamisekile, kungaba nzima ukuhlukanisa lokhu kuquleka kokuphazamiseka kokuziphatha.
***Ukuxhamazela okubangelwa ukuqina okuphezulu ezinganeni akubhekwangwa njengesithuthwane.
IZIMBANGELE ZESIFO SOKUWA
Abantu abaphilile bangabanjwa yizimo ezithile.Izimbangela ezijwayelekilezifaka :
Ukungalingani kwamakhemikhali njengoshukela wegazi ophansi noma i-sodium.
Amakhemikhali athile anobuthi noma izidakamizwa ezisebenziswa kabi.
Ukufa kohlangothi,kufaka phakathi ukopha
Uma walimala kokubeletha
IZINHLA ZESIFO SOKUWA/ISITHUTHWANE
Ukugula noma umkhuhlane
Ukukhanya okukhulu,ukubaneka kokukhanya, noma amaphethini.
Ikofi,utshwala, imithi noma izidakamizwa
Ukweqa ukudla,ukudla ngokweqile noma izithako ezithile zokudla.
Ukuphuthelwa ukuphuza imithi yakho.
Imjikelezo wokuya esikhathini.
IZIMPAWU ZESIFO SOKUWA/ISITHUTHWANE
Izimpawu ohlangabezana nazo zizoncika ohlotsheni lokuhlaselwa onalo.Ezinye zezimpawu ezijwayelekile zokuhlukunyezwa kubantu abanesifo sokuwa
Ukusonteka, noma ukuqinelana kwemisipha yomzimba.
Ukulahleka kokuqwashisa-ukuqunjelwa okuthile kungadala ukulahleka kwengqondo okungahlala imizuzwana embalwa kuze kube ngamahora.
Ukuquleka kubalulekile futhi ngoba kungesinye sezizathu ezivamile kakhulu ngemuva kwephutha ekuxilongweni kwesifo sokuwa.
Ubuthakathaka bungenzeka kunoma yiluphi uhlobo lokuhlaselwa futhi kunoma iyiphi indawo yomzimba isibonelo.Kungaba yingalo,umlenze noma zombili** ubuthakathaka engxenyeni eyodwa yomzimba kungahle kubonakale njengokuhlaselwa yisifo sohlangoth,kepha kunqume lapho ukuquleka sekuphelile.Lokhu kungadida nagokwengeziwe,ngoba imivimbo ngezinye izikhathi ingadangala ukubanjwa.
Ukukhathazeka,ukwesaba,noma umuzwa wokuza.Kunezinhlobo eziningi zama-auras abantu abangase bazithole.
Ukubhekana phakathi esikhaleni kuwuphawu olutholwa ngabantu abangakwazi ukubanjwa kokukhubazeka okungabikhona (okubizwa nangokuthi ukubanjwa kwezilwane okulimazayo) imvamisa laba bantu babonakala bephupha kancane noma belahlekile ngomncabango lapho,empeleni, bebhekene nokuhlaselwa.Ukuziphatha ngokubambelela kwesinye isikhathi kuhlala imizuzwana embalwa nje futhi kungahle kuhambisane nokushaywa umlomo noma ukunyakazaa okuphindayo njengokunyakaza komlomo noma iminwe.
Ukuhamba okungenhloso noma okuphindaphindayo, njengokukhumula ihembe,ukuguguquka okuphindayo,ukuqhwba kweminwe ngokuphindaphindiwe,ukuhlafuna okuphindayo noma amazwi aphindaphidanayo.Lokunyakaza kubizwa nge-automatism.
Izinkinga zokuziphatha-imicabango engajwayelekile,ukuzwa nokubona izinto ezingekho.
Ukuphindaphinda okuphindaphindiwe nokuhlanza.
INDLELA YOSHINTSHO YOKUPHILANESIFO SOKUWA
Bona udokotela wakho njalo futhi unamethele ohlelweni lakho lokwelashwa-phuza imishanguzo ngokuqinile njengoba kuchaziwe.
Gcina indayari yokuquleka ukusiza ukubona okuwumbangela ezinokubakhona ukuze uzigweme
Faka isongo sokuxwayisa ngonyango ukuze abantu bazi ukuthi benzeni uma uqulekile futhi ungakwazi ukukhuluma.
Fundisa abantu abasondelene nawe mayelana nokuquleka nokuthi benzeni lapho kunesimo esiphuthumayo.
Funa usizo lochwepheshe lwezimpawu zokudangala noma ukukhathazeka.
Joyina iqembu elisekelayo labantu abanenkinga yesifo sokuwa.
Thola inja yokuxwayisa lokho kungasiza ibone ezinye zezimpawu ngisho nangaphambi kokuba uzazi wena
Landela ukudla kwe-ketogenic lokhu kudla kungamacarbohydrates futhi kuphezulu emafutheni.ukudla kuphoqa umzimba ukuthi usebenzise amafutha ukuze uthole amandla esikhundleni se-glucose,inqubo ebizwa ngokuthi yi-ketosis.
INDLELA​ EPHEPHILE UKULAWULA ISIFO SOKUWA
Zifundise ngohlobo lwesifo sokuwa onaso,nemishunguzo oyiphuzayo memithamo,izimpawu eziyisixwayiso,okungobangela nokuthi ungakugwema kanjani.
Gcina ireckodi lokuqhuleka okungabangela ukudunwa,isikhathi sokuquleka , kwenhliziyo ukusiza ufunde ukuzigwema nokuthi wabelane nodokotela wakho ngokulawulwa okungcono
Gwema utshwala, uyeke ukubhema noma usebenzise ezinye izidakamizwa ezingekho emthethweni ngoba zinga bhebhethekisa ukwanda kwesifo sakho sokuwa.
Ukusekelwa okuvela emdenini nakubangani kuzosiza ukwazi ukubhekana kangcono nalesi sifo.Amaqembu okusekelana nawo azosiza njengoba ungabelana ngolwazi,ukukhungatheka nezindlela zokubhekana nazo.
Ukwelulekwa kungadingeka ukuze usize ngokusekelwa ngokomzwelo.
Qiniseka ukuthi ukhuluma nodokotela wakho ngaphambi kokuthatha izithanselo noma eminye imishanguzo njengoba ingasebenza ngemishangazo yakho yesifo.
Ukwenza ngcono impilo yakho yonke kungenziwa ngokudla ukudla okunempilo, ukugcina umzimba usebenza, ukulawulwa ukucindezeleka ngokuzindla noma ukuzivocavoca okujulile nokulala ngokwanele.Lokhu kungasiza ekunciphiseni isibalo sokuquleka onakho ngokungezwa kwemithi yakho yesithuthwane.
Khuluma nodokotela wakho ngamasu okupheka ekhaya,ikakhulukazi, uma ukuquleka kwakho kungalawulwa.Ubuphezulu, amanzi,ukushisa kanye nogesi yikhona okuyinkathazo kakhulu.Udokotela wakho angadlulisela ku-Therapist emsebenzini noma kumhlengikazi avakashele ongakunikeza izincomo ezithile.